कोरोना संक्रमणबारे यस्तो अभिनय गरी सबैलाई सजक गराएका शम्भुराज थापाको यो भिडियो हेर्नुहोस् – Ap Nepal
उनीको श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्। थापाको आजै पशुपति आ’र्यघा’टमा अन्तिम सं’स्कार गरिने परिवारले जनाएको छ। उनकाे नि’धनप्रति कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा श्र’द्धाञ्जली दिइरहेका छन् ।उनको परिवारमा सवै को’रोना संक्रमित छन्। बखतेले हल्का रमाइलो ८० औ भागमा को’रोना संक्रमितको अभिनय समेत गरेका थिए ।-इसिधाकुराअनलाइनबाट
Prevउपचारको लागि बसमा जाँदै गर्दा आमा बीचबाटोमै ज्यान गयो, सानो छोरा मृ`त आमाको का. खमा सुतिरहे..
Nextसम्भुराज थापाको प, शुपति आर्यघाटमा अन्तिम बिदाइ: रो, किएन बल्छी देखि म्याकुरीको आँ’सु -हेर्नुहोस (भि डियो सहित )
कस्तो छ त कोच दिप श्रेष्ठको अबस्था ? शुशिलले दिए कोच दिपको बारे यस्तो जान कारी-हेर्नुहोस ( भिडियो सहित)